News - The Chineke ememe ， FAYGOUNION ifuru ndokwa salonlọ Mmanya
Onyinye Chukwu Nwanyị salon FAYGOUNION ime ndozi ifuru
Ememe Emume Chineke abịala, FAYGOUNION haziri ndokwa ifuru maka chi nwanyị ndị ahụ. Na aha okooko osisi, chi nwanyị ndị China ga-aga ọnụ ifuru ọnụ. Achọrọ m ka unu niile nwee obi ụtọ ụbọchị Chukwu!
Roses, platycodons, carnations, daisies, onye nkuzi mere ka onye ọ bụla jiri nke ọ bụla mara ụdị okooko osisi a na-eji edozi ifuru taa, ma jiri ndidi kụziere gị otu esi edozi okooko osisi dị iche iche. Mgbe ndokwa ifuru ahụ bidoro, onye nkuzi gwara onye ọ bụla ka ọ tinye ihe ndepụta dịka ihe masịrị ha, wee jiri rose dị ka okooko osisi, wee tinye ifuru ndị ọzọ na mpaghara nke ịdị elu, ma jiri buds ndị a na-achaghị acha dị ka ndọtị iji mee ka anya niile ahụ. Ọ dị ka ịgbatị ahụ.
Ọ bụ ezie na ụdị okooko osisi dị iche na nke onye ọ bụla, n’okpuru aka ọrụ aka chi nwanyị ọ bụla, okooko osisi ọ bụla dị iche.
Mgbe ifuru haziri edozi, Flying Pigeon Fanciers dokwara achịcha maka chi nwanyị!
Na, taa bụkwa ụbọchị ọmụmụ nke onye nkuzi ifuru! Ọbụghị naanị nke a, ọnwa a bụkwa ọnwa ọmụmụ nke obere obere akụkọ abụọ ahụ, Xiao Chen na Xiao Yang nke Flying Pigeon Fanciers. Iji ohere a, onye ọ bụla zitere ha ụbọchị ekele ụbọchị ọmụmụ ~
Womenmụ nwanyị dị ka okooko osisi, okooko osisi na-achakwa ka nrọ.
Enwere m olileanya na chi nwanyị nke Flying Pigeon Fanciers nwere ike bụrụ anyanwụ nke ha! Yak un̄wana odu fi ke enyịn! Ka umunwanyi nile no n’uwa nwee obi uto ma buru eze-nwanyi nke ha rue mgbe ebighi ebi.
Single Wall corrugated Pipe Line, Hdpe Ugboro abụọ Wall corrugated Pipe Production Line, Single Wall corrugated Pipe Machine, Ugboro abụọ Wall corrugated Pipe Machine, Hdpe corrugated Pipe Extrusion Line, Pee / pp / ịkwanyere corrugated Pipe Production Line,